एक कल फोनसँगै छाएको त्यो सन्नाटा ‌ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- भूपेन्द्र शाह ठकुरी
शनिवारको दिन । अफिसको बिदा । काठमाडौको खाल्डोबाट बाहिर जाने निधो गरियो । मेरा अत्यन्तै हितैसी लक्षेन्द्र सिंह र म बनेपा जाने योजना बनायौं। नयाँ ठाउँ घुम्न पाएकोमा हामी निकै खुसी थियौं । दिनभरि घुम्यौ। नयाँ नयाँ कुराको अवलोकन गरियो । हामी एक आपसमा गफिदै थियौं। साँझ पर्न थालेको थियो। बतासे डाँडाबाट घाम हामीलाई चिहाइरहेको थियो ।
खाजा खाएर हामी फेरि काठमाडौ नै फर्कन सार्वजनिक गाडी चढ्यौं। बनेपाको गाडी यात्रुले खचाखच भएको थियो। साँझ परिसकेकाले गाडी नचढ्नुको विकल्प थिएन। सोहि बसको अन्तिम सिटमा एक दम्पती सानो छोरा सहित सँगै बसेका थिए। दुबै जना मौन थिए। छोरा चाहिँ चकचक गरिरहेको थियो । त्यत्तिकैमा बुढाको फोनमा घण्टी बज्यो । बुढाले फोन काटे. पुनः फोनमा घण्टी बजिरह्यो ! बुढी रिसले चुर हुँदै भनिन्. ‘को हो त्यो खुरूक्क फोन उठा ? पटकपटक फोन आईरहेको छ।” भन्दै जंगिन थालिन। बुढाले साथी हो भन्दै फोन काटे । ‘को साथी हो तेरो ? हिजो देखी फोन आएको आएै छ। राती १० बजे अफ गरेको फोन विहान १० बजे मात्रै खुला गर्ने ? बुढाबुढी भएको ठाउँमा बारम्बार फोन गर्ने को हो ? के नाता पर्छ तेरो ?’ ‘अब मैले साथीसंग पनि गफ गर्न नपाउनु ?’ बुढा नम्र स्वरमा बोल्दै थिए ।
यो संवादले बसमा रहेका यात्रुहरू चुपचाप थिए तर रमिते बनिरहेका थिए। बुढाबुढीको निजि मामला अरुले बोल्न पनि त मिलेन नि ? यो सब देखेर अन्य यात्रीको जस्तै मेरो पनि मनमा अनेकौ कुरा खेल्न थाले । यस्ता समस्याहरूको त्यो दम्पती एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो जस्तो भान भयो। प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, भाइबर लगायतका थुप्रै मल्टीमिडियाको शुरुवात भएको छ । पछिल्लो समय यीनिहरुको व्यापक दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ । घरमा श्रीमान वा श्रीमति भएकाहरु नै यसको सिकार हुनु धर्म, संस्कृति विरुद्ध त हो नै यसैले समाजमा गलत प्रभाव पार्दै डेरा जमाउन पुगेको देखिन्छ । नैतिक शिक्षाको खडेरी उत्पन्न हुँदै अपराध सिर्जना भइरहेका छन ।
प्रविधिकै कारण मुलुकमा साइबर अपराधमा वृद्धि भइरहेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ । फेसबुक कै कारण कयौं दम्पतिका घर उजाडिएका छन । कयौंको हत्या भएको समाचार माध्यममा थुप्रै पढ्न र सुन्न पाइन्छ । प्रविधिकै कारण यौनजन्य अपराध दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन । जसमा नेता, कलाकार, देखि प्रहरीसम्म यसका भुक्तभाेगी देखिन्छ । यसैको गलत प्रयोगले ‘मिटू’ लागेर कयौं राष्ट्रका उच्च अाेहाेदामा पुगेका व्यक्तिहरु पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनिरहेका छन । यसैको कारणले सांगठनिक अपराधहरु बढिरहेको महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंको आँकडाले समेत प्रष्ट पारेको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भएका छन्। महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा संलग्न भएको देखाउँछ । जसमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका २२ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सात दशमलव ९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन ।
नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति लागू भएको छ । तर, सूचना प्रविधिको सुरक्षा हेर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को केही धारामा मात्रै यसको कुरा उल्लेख छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै साइबर अपराधको घटना हेर्छ भने सिआइबी र साइबर सेलले साइबर घटनाका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्छन् । तर, साइबर सुरक्षाका लागि छुटटै सांगठिनक संरचनाको आवश्यकता नहुँदा समस्या देखापरेको छ । यस्ता घटनाबाट सतेच बन्न अहिलेको मुख्य आवश्यकता जस्तै बनेको देखिन्छ । साइबर सम्बन्धी कानून र सामाजिक संञ्जालको सहि र उचित शिक्षा अहिलेको पाठ्यक्रममा अपरिहार्य देखिन्छ । बेलैमा यी-यस्ता समस्या निराकरण नगर्ने हो भने समाजमा भाडभैलो निम्तिने निश्चित जस्तै छ ।